जुकरबर्ग किन गए चीन ? फुकुवा होला त चीनमा फेसबुक ? – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७४ कार्तिक १३, सोमबार) १०:३२
एकवर्ष पश्चात फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पुनः चीन भ्रमणमा पुगेका छन् । जुकरबर्गले बेइजिङको सिंघुआ स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरुसँग भेटघाट गरेको तस्वीर फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।
गुगलले पनि सन् २०१० मा नै आफ्नो गुगल सर्च सर्भिस चीनमा बन्द गरिसकेको छ ।
अब फेसबुकका लागि चीन प्रवेशको एक बाटो भनेको स्वयं सेन्सरसिप हो । यसका लागि फेसबुकले आफ्नै सेन्सरसिप टूलको विकाश गर्नुपर्दछ जसबाट निश्चित खाले पोष्टहरु निश्चित क्षेत्रमा स्वतः सेन्सरमा परुन् । फेसबुकले यस्तो टूलको विकाश गरे नगरेको चाही खुलेको छैन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार सि जिनपिङको दोश्रो कार्यकाल फेसबुकका लागि चीन प्रवेशको सुनौलो अवसर बन्न सक्दछ । सिको दोश्रो कार्यकालमा मिडियाहरुमाथिको सेन्सरसीप कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
फेसबुकले पछिल्लो समयमा चिनिया विज्ञापनदाताका विज्ञापनहरु बाहिरी विश्वमा बेच्नका लागि गरिरहेको सहयोगलाई फेसबुकको चीन प्रवेशको पूर्वाभ्यासका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
(२०७४ कार्तिक १३, सोमबार) १०:३२ मा प्रकाशित